बाढीपीडितको विलौनाः न रोपो न भकारी! - हिमाल दैनिक
बाढीपीडितको विलौनाः न रोपो न भकारी!
सप्तकोशी र त्रियुगा नदीमा आएको बाढीका कारण सङ्कलित अन्नसहितको घर र रोपेको खेत डुबेपछि यहाँका स्थानीयवासीको दैनिक रोजीरोटीमा प्रभाव पारेको छ । अर्कातिर उनीहरुलाई भविष्यको अनिश्चितताले पनि सताएको छ ।
सो वडाको पथहरा र धारा खोला क्षेत्रको कूल एक हजार विगाहा भन्दा बढी धानखेत डुवानका साथै बाढीले ल्याएको बालुवाले पुरेर मरुभूमिमा परिणत भएको छ । त्यस्तै २४ घर बस्नै नहुने गरी क्षति पुगेको धाराखोला टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष कृष्ण काप्mलेले जानकारी दिनुभयो ।
चुरे क्षेत्रमा बढ्दो प्रकृतिको दोहनसँगै वन जङ्गल नासिँदै जानु र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बस्ती विकास हुनुले बाढी पहिरोको प्रकोप बढाएको बताउने बेलका काठमाडौँ विकास समाजका अध्यक्ष महेन्द्र थापा प्रत्येक वर्ष देखिने यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान तर्फ स्थानीयवासी एवं सरोकारवाला सबैको बेलैमा ध्यान पुग्नुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ । रासस
Prevपछिल्लोएन विपरित राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न सरकार हतारिएपछि संसदीय समितिमा हंगामा
अघिल्लोकिस्तामा ५० लाख माग्दा ३० लाख दिन्छु भनेँ…Next